Izidingo Zesizinda Sokulungiswa noma Ayilona Ifayela Le-Database
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Access Repair I-database 'filename.mdb' idinga ukulungiswa noma akuyona ifayili ledatha.
Imininingwane eningiliziwe mayelana "Nezidingo Zesizinda Esizolungiswa noma Iphutha Le-Database" akulona iphutha
Lapho usebenzisa iMicrosoft Access ukuvula ifayili ledatha yokuFinyelela eyonakele, ubona umlayezo wephutha olandelayo kuqala:
Wena noma omunye umsebenzisi kungenzeka uyeke ngokungalindelekile i-Microsoft Office Access ngenkathi i-database ye-Microsoft Office Access ivuliwe.
Ngabe ufuna iMicrosoft Office Access izame ukulungisa i-database?
lapho 'filename.mdb' igama lefayela le-Access MDB elizovulwa.
Isikrini sesikrini sibukeka kanjena:
Ungachofoza inkinobho ethi "Yebo" ukuvumela Ukufinyelela kulungise i-database. Uma iMicrosoft Office Access yehluleka ukulungisa i-database eyonakele, izoveza umyalezo wephutha olandelayo:
Ifomethi yedatha engaziwa 'filename.mdb'
Isithombe-skrini sibukeka kanjena:
Futhi ungachofoza inkinobho ethi "KULUNGILE" bese ubona umyalezo wesithathu wephutha:
I-database 'filename.mdb' ayikwazi ukulungiswa noma akuyona ifayela le-database ye-Microsoft Office Access.
okusho ukuthi iMicrosoft Office Access izame konke okusemandleni kepha namanje ayikwazi ukulungisa ifayili.
Le yiphutha le-Microsoft Jet ne-DAO elibambekayo futhi ikhodi yephutha ngu-2239.
Leli phutha lisho ukuthi injini ye-Access Jet ingabona izakhiwo eziyisisekelo nezincazelo ezibalulekile ze-database ye-MDB ngempumelelo, kepha ithole inkohlakalo encazelweni yetafula noma idatha yetafula.
IMicrosoft Access izozama ukulungisa inkohlakalo. Uma izincazelo zethebula ezibalulekile kudathabheyisi yonke zingenakulungiswa, izokhombisa ifayela le- "Isakhiwo sedatha esingaziwa" phinda futhi ukhiphe umsebenzi ovulekile.
Ungazama umkhiqizo wethu DataNumen Access Repair ukulungisa ifayela le-MDB nokuxazulula leli phutha.
Sampula ifayela le-MDB elonakele elizodala iphutha. kholwase2
Ifayela lilungiswe nge DataNumen Access Repair: i-mydb_2_fixed.mdb (Ithebula le- 'Recovered_Table2' elisefayeleni elilungisiwe elihambisana netafula le- 'Staff' elisefayilini elingakonakali)